Gabdhaha Dolls-ka ee Dhabta ah ee Sawirka Kooban
Aad Albumka Doll Doll aad u dhameystiran
Marabtaa inaad waxbadan ka ogaato caruusadaha galmada? Ku soo dhowow harem doll. Halkan waxaad ka heli kartaa qaabab kala duwan oo jidh ah oo aad u dhigmi kartaa madaxyo qurux badan oo kala duwan. Xulo isku-darka la doonayo ee tan jilitaanka galmada bogga albumka. Dad badan ayaa laga yaabaa inay la kulmaan dhibaatooyin badan markay iibsadaan caruusadaha galmada. Halkani waa goob lagu soo bandhigo caruusadaha. Macluumaadka ku saabsan caruusadaha waa mid aad u dhameystiran, waxaad ku arki kartaa iyaga oo xiran dhar kala duwan iyo is qurxin.
Waxaa jira sababo badan oo sharci ah oo loogu talagalay qof inuu ku tiirsanaado adeegga caruusadda galmada. Waxaa laga yaabaa inaad xishood badan tahay oo aadan dadka kale la joogi karin, ama aad rabto inaad hagaajiso xirfadahaaga galmada ka hor intaadan soo gelin dunida dhabta ah. Albumkaan caruusada ah ee kumbuyuutarka ku sawiran kuma habboona kuwa cusub, laakiin sidoo kale dadka jecel caruusadaha.